China Folding yemari trolley DX3011 mugadziri uye mutengesi | Duoduo
Ita Nha .:DX3011
Iyo inorema mutoro ruoko ruoko ngoro, yakanaka dhizaini uye yakasimba. Iyo yakakodzera kushandisa mumhuri uye kubuda. Iwo mavhiri uye epazasi ndiro anokwenenzverwa, ayo anochengetedza zvikuru nzvimbo uye inounza hukuru hwakanyanya kuhupenyu hwedu hwezuva nezuva nekufamba. Zviri nyore kuisa mumota medu. Iyo ndiro yepasi yakagadzirwa neAluminium, inorema mutoro uye anti-ngura, zvakare chemukati anti-slip design uye yakachengeteka kushandiswa.
Iyo yakasarudzika roller foldable dhizaini inochengetedza nzvimbo. Iyo aluminium chassis ine simba rakakura kugona, yakanakira kuponesa vashandi, inoyevedza uye yakajeka chitarisiko. Yakanyanya kukodzera nhandare dzendege, mashopu, dzimba dzekuchengetera nedzimwe nzvimbo. Icho chinhu chakakosha pashanyo yako pakufamba, kutenga, nekutakura.
Nekufongora yakawanda-basa rekutenga ngoro, iwe nemhuri yako hauchazonetseki nezvezvinhu zvidiki pamba, uye chengetedza nguva uye nesimba.
Plastiki yakazara firmware, ine seamless rivets, kutendeuka kwemuviri kuswedera zvakasimba.
Efa yakakanda aluminium tereyi, super rori, isina ngura.
Irrigation taya, kupfeka kuri muted. Mawiricheya akanakisisa pamusika nhasi.
Yakanakisa terevhizheni bhatani, nyore uye inokurumidza kushandisa.
Rakareba kupeta uye kuvhura: Inokupeta uye kuvhura nyore. Foldable dhizaini, yakanakira uye inoshanda. Chinja zvaunotaura, ita kuti kuvhiyiwa kuve nyore.
Kureba kwakareba: Kureba kwembambo kunogona kugadziriswa, akareba ari nyore uye anoshanda. Akasimudza nhumbi dzekushandisa nyore. Kunyatsoteedzera ergonomic bvunzo, kuwirirana nekureba kwemuviri wemunhu, kuvhiya kwacho kuri nyore.
Multi-basa: Iyo yakakura uremu huremo inosvika 60 Kg (132.28 lbs), yakakura pakufamba, kutenga uye zvakare nepikicha. kuitira mapoto akareruka kutenderedza gadheni, uye Kuwedzera kukuru kune bhutsu yemotokari yekutakura zvinhu zvinorema kana uchitenga, zvakanyanya kubatsira kana uchisimudza trolley kuti ipinde mubhazi semuenzaniso.
Yepfuura: Flat-panel ngoro HC350G / HC450G
Inotevera: Folding mikwende trolley DX3012